Orinasa efa niorina tsara amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
Momba ny orinasa: 1. Ny orinasan-tsoratra dia voasoratra anarana amin'ny volana aprily 2012 ary mandeha soa aman-tsara nanomboka teo. Ny foto-kevitr'orinasa dia ny hividy fitaovam-pitaterana sy vokatra mifandraika eo an-toerana, miaraka amina ampahany hafarana avy any Thailand sy Supply ho an'ny mpanjifa orinasa ...
Date : Septambra 18, 2021
Momba ny orinasa:
1. Ny orinasan-tsoratra dia voasoratra anarana amin'ny volana aprily 2012 ary mandeha soa aman-tsara nanomboka teo. Ny hevitra ara-barotra dia ny hividy fitaovam-pitaterana sy vokatra mifandraika eo an-toerana, miaraka amina ampahany hafarana avy any Thailand sy Supply ho an'ny mpanjifa orinasa. Ny toerana misy an'i Dubai ihany no karakarainay. Ny mpanjifanay dia 600+ ary mavitrika amin'izao fotoana izao dia 250. Betsaka ny efitrano tokony hamboarina ary miankina amin'ny drafitra fampiasam-bola sy fanitarana fotsiny izany.
2. Miasa amin'ny trano fanatobiana entana ary tsy manana fivarotana antsinjarany izahay. Io dia mampihena ny vidinay, amin'izay manome tombony ho an'ny mpanjifanay. Na izany aza, ny fampiroboroboana ny fivarotana antsinjarany amin'ny foibe mitovy amin'izany dia hampitombo ny isan'ny varotra.
3. Rafitra ara-dalàna: Company Limited Liability Company (LLC)
4. Toerana: Miorina tsara amin'ny faritra lehibe any Al Quoz, izay iray amin'ireo tobim-pivarotana any Dubai. Ny eo an-toerana dia manana mpivarotra marobe, manamaivana ny fizotry ny fividianana entana ary koa ny mpanjifa ahafahana manome serivisy haingana.
5. Serivisy atolotra: Fitaovana fiasa sy biraon'ny mpanjifa - Fanjifana mpanonta - Fampidirana tena - Fanontana (Office Stationary, izany hoe karatra, lohan-taratasy, boky misy, alimanaka sns) - Fanomezana sy fiderana - Zavatra hafa ao anatin'ny sehatry ny asa fahazoan-dàlana
6. Fanatrehan'ny orinasa Google - Heverin'ny Google, vokatra voatanisa, lahatsoratra mahazatra, sns.
7. Tranonkala ecommerce eo am-panatanterahana. Varavarana fandoavam-bola efa ampiasaina, fandefasana ny antoko fahatelo efa miasa. Amin'izao fotoana izao ny tranonkala dia eo amin'ny sehatry ny lisitry ny vokatra.
8. Fanatrehan'ny media sosialy - Facebook, Instagram, LinkedIn, twitter sns.
9. Fanatrehan'ny toerana tsena - vokatra voatanisa ao Amazon.ae, Supplyvan, Wemena, sns
10. Mpiasa efa za-draharaha 3 - Sr. Admin Incharge: mitantana ny orinasa manontolo, Biraon'ny mpandraharaha sy ny varotra: Tompon'andraikitra amin'ny fiantsoana tele, fikajiana ary fanomanana ny filaminana, mpamily: tompon'andraikitra amin'ny fividianana sy ny fandefasana.
11. Tally Software napetraka
Ny tompona dia Indiana Britanika nonina niverina tany UK noho ny antony manokana. Mitady mpividy izay maniry fatratra hanao raharaham-barotra.
Ny sanda ara-barotra dia misy:
1. Valin'ny fahazoan-dàlana ara-barotra - 04/03/2022
2. Valim-panofana birao - 14/03/2022
3. Valin'ny visa ho an'ny mpiasa tamin'ny 3 - 03/11/2021, 17/01/2022, ary 22/07/2022
4. Valin'ny karatra fananganana - 14/06/2022
5. Tombana sandan'ny tombana - AED: 50k-60k. Ny fanombanana farany dia hatao amin'ny faran'ny taona.
6. Fiara fitaterana fiara H1, Mulkiya 10/02/2022 ary fiantohana feno 13/03/2022
7. Fanamboarana birao sy trano fanatobiana entana, fanaka sy fitaovana sns.
8. Karatra Logo-Catalog-Brochure-Business (mifototra amin'ny hevitra)
TSY MISY VOLA MISY
Kaonty #amazon fba amidy amina orinasa amidy
Orinasa lehibe # amidy amin'ny 2019
Fivarotana solika #bp amidy
#fivarotana amidy avaratra andrefana
# fiaraha-miasa amin'ny varotra amidy
#fivarotana varotra amidy eo akaikiko
Orinasa #cnc amidy
Publier isan-kerinandro # daltons amidy
Agence fikarakarana # domiciliary amidy
Orinasa # e2 amidy
#etsy miala amin'ny orinasa
#ge mivarotra fitsaboana
#fomba hahitana mpividy ho an'ny orinasanao
# Ahoana no fomba hivarotana fananana ara-barotra
# Ahoana no hivarotana amin'ny orinasa
#fomba hivarotana tranokala amin'ny orinasa kely
#fomba hivarotana ny orinasanao haingana amin'ny vidiny avo indrindra
#how hivarotra ny orinasanao an-tserasera
# orinasa famarotana amidy
Kaonty #janitorialy amidy
Orinasa lehibe # amidy
Serivisy # lalàna amidy
#Ny varotra fisotroan-dronono ara-dalàna sy ankapobeny mba hanomezana toky
#principal dia mahazo fargo lavadrano
Orinasa varotra # amidy eo akaikiko
#Running Business stationery amidy any dubai
#sell ny hevitrao momba ny asa aman-draharaha
#selling ny fanananao ara-barotra manokana
kafe kafe kely amidy eo akaikiko
Fivarotana kely kely amidy
Orinasa fivarotana # fivarotana
Orinasa fivarotana # fivarotana any dubai
Orinasa fivarotana # fivarotana any uae
#subway franchise amidy amin'ny tompona akaiky ahy
Orinasa fivarotana kodiarana amidy eo akaikiko
Orinasa ara-bola #vendor amidy
Ny varotra #Well Running Stationery amidy any dubai
# amidy fargo amidy